जन्डिस के हो ? कसरी वाच्ने ? – email khabar | Latest news of Nepal
प्रकाशित : २०७१ जेठ ९ गते ६:३५
तिन सातादेखि विराटनगरमा फैलिएको हेपटाईटिस अर्थात जण्डिले प्रकोपकै रुप लिएको छ । खानेपानी संस्थानले वितरण गर्दै आएको पानी दुर्षीत
भएपछि त्यस क्षेत्रमा जण्डिसले प्रकोपको रुप लिएको हो । हाल सम्म त्यसकै कारण ११ जनाले ज्यान गुमाइ सकेका छन् भने हजारौं सर्वसाधारण विरामि परि रहेका छन् । विरामिहरु भने रुढिवादि परम्परालाई अंगाल्दै उपचारको अलवा धामि झाक्रिमै अनी आयुर्वेदिक औंषधि प्रणालीमै कुदिरहेका छन्
अहिले पनि हाम्रो समाजमा जन्डिसको उपचार भन्नेबित्तिकै आयुर्वेदलाई सम्झने गरिन्छ । परम्परादेखि चल्दै आएको आयुर्वेदमा पक्कै पनि धेरै
रोग निको गर्ने क्षमता छ र यसलई अस्वीकार गर्न मिल््दैन । तर, जन्डिस भएपछि खना बार्ने चलनले रोगलाई अझ बिगार्दै लाने गरेको चिकित्सक बताउाछन ।
कस्तो रोग हो जन्डीस भनेको ?
इपिडिमियोलोजि तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर बाबुराम मरासिनिका अनुसार सरल भासामा आाखा, छाल र मुखभित्र पहेले हुनुलाई
जन्डिस भनिन्छ । यो कुनै रोग नभएर विभिन्न रोगमा देखिने लक्षणमात्र हो । साधारणतया रगतमा बिलिरुविनको मात्रा एक मिलिग्राम र १०० एमएलभन्दा कम हुन्छ । बिलिरुविनको मात्रा तीन मिलिग्रामभन्दा बढी भएमात्र आखा पहेलो देखिन्छ । बिलिरुविन विभिन्न अवस्थामा बढ्न सक्छ र जन्डिस देखा पर्ने तीन विशेष अवस्था रहन्छ । रगतको रातो कण अत्यधिक नष्ट भएर धेरै बिलिरुविन निस्की कलेजोले त्यसलई लिन नसक्नु, कल्ेजोको रोग लगेपछि रगतबाट बिलिरुविन लिएर पित्तमा फ्यााक्न नसक्नु र पित्तको नली कुनै कारणले अवरुद्ध भई पित्त आन्ऽामा जान नसक्नु जन्डीस हो ।
जन्डीसको असर ?
वयस्कमा १ हुनु र १० हुनुमा कुनै फरक पर्दैन भने २५ भन्दा माथि पुगेमा मिर्गौ लाको समस्या भएका व्यक्ति मा मिर्गैंला खराब हुनसक्छ । नत्र बिलिरुविनले
आाखा र छाला पहोलो हुने, पिसाब गाढा हुने, दिसाको रङ हल्का पहोलो हुने र
कहिलेकाहीा माटोजस्तो हुने गर्छ ।
जण्डिसको उत्पति र प्रकार ?
३. अब्सट्रक्टिव जण्डिस यसखालको जण्डिस लिभरमा देखिने खराबीबाट सिर्जना हुन्छ । खासगरी बिल पाइपमा उत्पन्न हुने अवरोधका कारण यो
जण्डिस देखिने गर्छ ।
कसरी गर्ने जन्डिसको उपचाररु ?
जन्डिस कुनै रोग नभएर रोगको लक्षणमात्र भएकाले यसको कुनै उपचार
गर्नु पर्दैन । हेपटाईटिस ई अर्थात जण्डिसको कुनै उपचार छैन् भने यसको
खोप पनि नरहेको चिकित्सकहरु बताउछन् । हेपटाईटिस ए को भने खोप उपचार सबै हुने गरेको छ । विलिरुविनको मात्रा एक मिलिग्राम हुनु र पााच मिलिग्राम हुनुमा शरीरमा कुनै फरक पर्दैन । कतिपय रोगले जन्डिस गराउने भए पनि त्यस रोगको अथवा रोगको कारणको कुनै उपचार गर्नु पर्दैन । जस्तै हानिरहित जन्मजात रोग गिलवर्ट सिन्ड्रोम आदिको उपचार नगर्दा बिरामीको आयु घट्दैन । हेपाटाइटिस इ, ए र हेपाटाइटिस बी ले गर्ने एक्युट हेपाटाइटिसमा
कुनै उपचार गर्न पर्दैन । रगतको विभिन्न जााच गरेर जन्डिसको प्रकार र त्यसको कारण पत्ता लगाउन सकिन्छ । अल्ट्रासाउन्ड , भिडियो एक्सरे, गरेर शल्यचिकित्साबाट उपचार गर्नुपर्ने जन्डिस छुट्याउन सकिन्छ । कुनै अवस्थामा रोग यकिन गर्न गाह्रो भए कलेजोको टुक्रा निकालेर बायोप्सी जााच गर्नुपर्छ ।
जन्डिस लागेमा के खाने के नखाने ?
डाक्टर बाबुराम मरासिनिका अनुसार नेपालीसमुदायमा जन्डिस भन्नेबित्तिकै उसिनेको खानेकुरा, नुन बेसार नभएको, गााजर, कााक्रो, मेवा, ग्लुकोज र उखुको
रस ज्सता यावत फलफुलहरु खने चलन रहेको छ । जन्डिस भएको अवस्थामा
कलेजो र पित्तको नलीका कारण चिल्लो पदार्थको पाचन क्रियामा असर पर्ने भएकाले चिल्लो कम खाने गर्नु पर्दछ ।
योग गर्ने, सानी उमालेको अर्थात पानीमा क्लोरीन हालेको हुनुपर्दछ । त्यस्तो पानी खाएको खण्डमा रोगले समाउन सक्दैन् । अर्को तरीका फिल्टर गरेको पानीबाट पनि हेपटाईटिस ई भाइरस छिर्न सक्छ त्यसैले पानी उमालेर खानुपर्छ भन्नुहुन्छ ईपिडिमियोलोजि तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर बाबुराम मरासिनि । खाना तताएको स्वच्छ वातावरणमा राखेको खाने पौष्टीक युत्त खाना खाने तथा कावोहाईटेड युक्त खाने गर्नु पर्दछ ।
फलफुल खादापनि सफा वातावरणमा रहेता पनि तातो आयोडिन युत्त पानीले पखालेर खाने ।
असुरक्षीत पानी जहाजहाा पाइपबाट बगिरहेको छ त्यो क्षेत्र जोखिमयुक्त क्षेत्र हो । हिमाल पहाड तराई जहा भएपनि यस्तो अवस्थामा जोखिम रहेको हुन्छ ।
विराटनगर संगै यतिवेला काठमाण्डौं बढि जोखिममा रहेको चिकित्सकहरु बताउछन् । पानी वित्ण गर्दा ट्याङकी मा क्लोरीन हाल्नुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन् । यस्तो विधि नअपनाएको ठाउमा समस्या देखिने गरेको छ । १ देखि २ प्रतिशत मानीसमा यो रोग निकै जटिल गरी देखिने गरेको छ । धेरै
रक्सी खाने र कलेजोमा समस्याभएका हरुको योरोगबाट मृत्यु समेत हुनेगरेको पाईएको मरासिनिको भनाई रहेको छ । गर्भवति महिलाहरु पनि यसको सिकार बन्ने गरेका छन् ।
आस्थायी शिक्षकको आन्दोलन स्थगित